Xukuumadda Somaliland oo amar ku soo rogtay Shirkadaha Isgaadhsiinta ee Gobolka Sool | Somaliland.Org
January 30, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xukuumadda Somaliland, ayaa amar ku soo rogtay shirkaddaha Isgaadhsiinta ee dalka.
Wasiirka Boosaha iyo Isgaadhsiinta Somaliland Cali Maxamuud Axmed (Sandule) oo isagoo ku sugan magaalada Laascaanood shalay u waramay idaacadda dawladda ee Raadyow Hargeysa, waxa uu shirkadda Isgaadhsiinta uga digay inay kaadh siiyaan qof aanay damiin ka haynin, taasoo uu sheegay in la’aanteedu ay halis nabadgelyada ku keeni karto.
Wasiirku waxa uu sheegay in shirkaddaha Isgaadhsiinta ee Laascaanood ay amar ku siiyeen in la demiyo khadka telefoonka gacanta ee Mobile-ka ee gobolkaas, maadaama sida uu sheegay uu adeegsigoodu keeni karo halis amaan-daro.
Waxa uu sheegay inuu shirkaddaha ku wargeliyay in haddii baadhis looga baahdo qofka ay kaadhka siiyeen ay damiinkiisa heli karaan.
Sidoo kale, Taliyaha qaybta Booliska ee Soolka gobolka Maxamed Saleebaan Gooni oo isna u waramay Raadyow Hargeysa, waxa uu sheegay inay wadaan hawlgalo la xidhiidha sidii ay u soo qaban lahaayeen kuwa ka dambeeya qaraxyada muddooyinkan u dambeeyay ka dhacayay Laascaanood.
Mr. Gooni waxa uu sheegay in qalabka wax lagu qarxiyay yahay mid lagu farsameeyay gudaha magaalada, loona adeegsanayo Garaa’ido, Bayteriyo, Masaabiir, Moobilo iyo qalab kale oo la isku dardaray, sidaa dareedna ay hawlgalkooda ka bilaabeen dadka ku shaqeeya farsamada gacanta.
Waxa uu sheegay inay baadhis ku hayaan dadkii ka dambeeyay qarax laba qof ku dhinteen oo doraad ka dhacay magaalada Laascaanood, kaasoo lala eegtay Badhasaabka gobolka Sool Faarax Askar Xusseen oo haatan dhaawaciisu yaalo Cusbatalka Hargeysa.
Taliyuhu waxa uu ka codsaday dadweynaha gobolkaasi inay la shaqeeyan ciidanka Booliska, isla markaana u soo gudbiyaan cid kasta oo ay ka shakiyaan.
Siday idaacaddu faafisay, ilaa haatan waxa hawlgalkaa Booliska lagu xidhxidhay ilaa 200 oo qof oo u badan dadka soo-gelootiga ah iyo dad kale oo laga shakiyay.
Warku wuxuu intaa ku daray, in xaalada magaalada Laascaanood ay haatan degen tahay, iyadoo ay halkaas ku sugan yihiin ilaa lix Wasiir oo Xukuumadda ka tirsan iyo masuuliyiin kale.
Xigasho: Wargeysk Ogaal
Previous PostShirka Midowga Afrika ee Addis-Ababa oo lagaga hadlayo qaddiyadda Aqoonsiga SomalilandNext PostAbwaanno dhaliilay Siyaasadda hoggaanka dalka, kana dayriyay xaaladda nololeed ee Bulshada	Blog